पेट पुट्ट बाहिर निस्किएर लज्जित हुनुहुन्छ ? बिहान उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् मात्र यी काम ! – Sandesh Press
October 2, 2021 276
Prevबुढी औँला ठूलो हुने व्यक्ति स्मार्ट, तपाईको खुट्टाको औँला कस्तो ?
Nextसंसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ?
के थियो क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि निर्णय ?